Volana Jolay : mpianatra kabary 800 nahavita fianarana
08/08/2018 admintriatra 0
Misandrahaka manerana izao tontolo izao. Kolontsaina iray mampiavaka ny Malagasy ny fahaizana mandaha-teny. Efa ho taona maro no nisy ny fampianarana kabary teto amintsika, ary mbola mitohy izany hatramin’izao. Nandritra ny volana jolay nivalona teo …Tohiny
Wawa : Nankasitrahan’ny Filoha
Manandratra avo hatrany ny kolontsaina. Toa ny isan-taona, dia ny marainan’ny alatsinainy teo vao nikatona tanteraka ny hetsika ara-kolontsaina Sômarôho notanterahina tany Nosy Be ny 01 ka hatramin’ny 05 aogositra lasa teo. Toa ny tamin’ny …Tohiny
Zandarimaria : Noraisin’ny SEG ny CONADIH
Noraisin’ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena vaovao tao amin’ny Birao fiasany tao amin’ny Toby Jeneraly Ramarolahy tao Betongolo omaly faha-6 aogositra 2018 tamin’ny 03 ora tolakandro, ireo solontenan’ireo mpikambana eo anivon’ny « …Tohiny
Fiarakodia : Misy garazy azo antoka ve ?
Andohatapenaka, 67 Ha, Behoririka, Andravoahangy, Mahavoky, sns. Mihamitombo isa hatrany ireo toerana ahitana mpamboatra fiarakodia, izay moa anarana mahazatra iantsoana azy ireny na ambara tsotra hoe «mécanicien». Misy karazany roa izy ireo, ao ireo mba …Tohiny